Nature Republic Myanmar (@naturerepublicmyanmar) | Insharee
Nature Republic Myanmar (@naturerepublicmyanmar) [similar]
Korea's #1 fastest growing natural and eco-friendly cosmetics brand Nature Republic Myanmar Official Instagram
Nature Republic Myanmar (@naturerepublicmyanmar)
NR California Organic Aloe Vera 92% Soothing Gel ( 300ml ) 7700Ks !
1 Product = 8 Uses
1 Make Up Base - မိတ်ကပ် ၂ ဆ gel ၁ ဆ (၂း၁) လိမ်းပေးနိုင်ပါသည် ။
2 Mask Pack - ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် gel ကလေးကို လိမ်းပေးပြီး ပေါင်းတင်နိုင်ပါသည် ။
3 Body Lotion - နေလောင်ဒဏ် ၊ အပူလောင်ခြင်းဒဏ် ၊ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေလေးကို စိုပြေ အေးမြ လန်းဆန်းနေစေပါသည် ။
4 After Shave Cream - အမျိုးသားများ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပြီးနောက် လိမ်းပေးနိုင်ပါသည် ။
5 Relax Swollen Eyes - အိပ်စက်အနားယူမည့် အချိန်တွင် gel အား cotton pad ပေါ်သုတ်လိမ်းပြီး မျက်ခွံများပေါ်တွင် မိနစ်အနည်းငယ် အုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်လုံးအာရုံကြောများ အညောင်းအညာပြေလျော့စေပါသည် ။
6 Hair Coat / Hair Gel (no sticky!) - ဆံသားလေးများကို နူးညံ့ပျော့အိ စေပြီး ဆံနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသားများလည်း Hair Gel အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ပါသည် ။
7 Nail Essence - လက်သည်းခြေသည်းလေးများပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည် ။
8 Relax Sunburn & Heat Rash - နွေအခါတွင် အသက်အရွယ်မရွေး မိတ်များပျောက်ကင်းစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Nature Republic သည် ကမ္ဘာ့ No.1 *** ၈ မျိုးသုံး California Organic Aloe Vera 92% Gel *** ကို သူမယှဉ်နိုင် ပထမဦးဆုံးစတင် တီထွင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်း 7700ks ဖြင့်သာ ရောင်းချပေးပါကြောင်း ၊ *** 92% *** တစ်မျိုးတည်းသာ ထုတ်လုပ်ပါကြောင်း ၊ အခြား 93% 95% 98% 99% အစရှိသော ရာခိုင်နှုင်းများဖြင့် လုံးဝ (လုံးဝ) ကို မထုတ်လုပ်ပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည် ။
Feel the Nature. NATURE REPUBLIC --------------------------------------------
#NRAloeVera92Gel #SoothingGel #Moist #Cool #Clear_Skin #HeadToToe #8in1Use #MustHaveItem #7700Ks #Naturegram #0402
နွေရာသီ လတပေါင်းမှာ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင်းနဲ့ မှ လုံးဝလက်မလွှတ် သင့်တဲ့ NR ရဲ့ အကြီးမားဆုံး HELLO SUMMER SUPER SALES ပွဲတော်ကြီး ( March 1 - March 31, 2018 ) !!!!!!!!
နေမင်းကြီးထက်အရှိန်ပြင်းတဲ့ Up to 70 % OFF Discount Products များ !!!!!!!!
ဥသြငှက်တွေထက် နားဝင်ချိုစေမယ့် 50 % OFF + BUY 1 FREE 1 Discount အစီအစဉ်များ !!!!!!!!
ရွက်ဝါတွေထက် ပိုကြွေစေမယ့် BUY 1 FREE 1 Products များ !!!!!!!!
အစရှိတဲ့ Products အမျိုးပေါင်း ( ၃၀၀ ) ကျော်ကို NR Official Showroom တိုင်းနှင့် Official Online Delivery ကြီးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အကြီးမားဆုံး အကြမ်းစား ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ DISCOUNT ကြီးများ ချထားသည့်အပြင် မည်သည့် Products ကိုမဆို စုစုပေါင်း ( ကျပ် ၅၀၀၀၀ ) ဖိုး ၀ယ်ယူအားပေးရုံဖြင့် ကံ့ကော်တွေထက် ပိုလှစေမယ့် ထူးခြား ဆန်းကြယ်လှတဲ့ ကမ္ဘာမြေတခွင်မှ ရှားပါးအဖိုးတန် ဆေးဖက်ဝင်ပန်း ( ၁၀ ) မျိုး ️ နဲ့ ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ NR 10-in-1 Fresh Herb Facial Foam 170ml ( ကြိုက်ရာရွေး Brazil ACEROLA CHERRY , France SNAIL , Italy PEACH , California ALOE VERA ) ရှယ်ဗူးကြီးပါဝင်တဲ့ HELLO SUMMER SPECIAL GIFT SET ကြီးကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်လို့ NR Official Show Room နှင့် Official Online Delivery (09-421149884, 09-797800008, 09-797600006) ကြီးသို့ အမြန်ဆုံးနဲ့ အစောဆုံးသာ အရောက်လှမ်းလာခဲ့ဖို့လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ တယ်နော် !!!!!!!!
#NatureRepublicMyanmar #March #HelloSummer #Promotion #upto70discount #Buy1Free1Products #Buy50000ks #HelloSummerSpecialGiftSet #FreshHerbFacialFoam #Acerola #Peach #Snail #AloeVera #Choice #Naturegram #0401
ကျန်းမာသန်စွမ်း ၊ နူးညံ့အိစင်း ၊ လင်းလက်​တောက်ပ ဦးခေါင်းထက်ကဂန္တ၀င်တွင် ဆံနွယ်လေးတွေရဲ့ အလှကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုလည်း ဆံကေသာအလှကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သူတိုင်းမှာရှိကြမှာပါ။ NR ရဲ့Hair Care Special Products (3) မျိုးနဲ့ဒီလိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုတစ်လုံး တစ်ဝကြီး ပြည့်စုံနိုင်ပါပြီနော်
(1 ) Argan Essential Deep Care Shampoo - 300 ml - 18,500 Ks
NR ရဲ့ Fans ချစ်သူတိုင်းအတွက်ကတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူး လို့ထင်ပါတယ်။*Korea တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိ တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးစွဲသူတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့ အရ အကောင်းဆုံး NO.1 ဆု* ရရှိထားတဲ့ Argan Essential Deep Care Shampoo ကတော့ ဆံကေသာမြတ်နိုးတန်ဖိုးထား သူတိုင်းအတွက် ခေါင်းတစ်ခါလျှော်ပြီးတိုင်း ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပီတိဖြာသွားစေတဲ့ Shampoo ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(2 ) Argan Essential Deep Care Conditioner - 300 ml - 18,500 Ks
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် Africa တိုက် Morocco နိုင်ငံတွင်သာထွက်ရှိတဲ့အလွန်ရှားပါးပြီး အဖိုးတန်လူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝ Argan Oil လေးကိုအခြေခံပြီး အထူးထုတ်လုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ရှားပါးတန်ဖိုးကြီး Organic Argan Oil လေးပါဝင်သောကြောင့် Argan Shampoo နှင့်အတူဆံနွယ်လေးတွေကို အများနှင့်မတူနူးညံ့ချောမွတ် ၊ ပျော့ပျောင်း အိဆင်းကျလာစေပြီး ဆံပင်သားဖွာခြင်း ၊ နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးကာကွယ်ကုသ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆံနွယ်အရောင်လေး တွေကိုလည်းသိသာစွာဝင်းပလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။(သုံးစွဲနည်း - Shampoo လေး သုံးပြီးနောက် ရေစိုနေသောဆံသားလေးမှာ ၂ မိနစ်လောက်လိမ်းကာရေနှင့်ပြန်ဆေး ချရန်)
(3 ️)Argan Essential Deep Care Hair Pack - 200 ml - 17,500 Ks
Organic Argan Oil လေးရဲ့တကယ့်အဆီ အနှစ်သာရတွေနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝမှရရှိတဲ့လှပအဖိုးတန် Lavender, Peppermint, Freesia, Chamomile, Rosemary and Primrose ပန်းကလေးများ လည်းပါဝင်လို့ဆံသားအဖျားမှအရင်းထိ Vitamin နှင့်အာဟာရဓါတ်များကိုကြွယ်ဝ စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ယိမ်းနွဲ့တောက်ပနေ သော စွဲမက်ဖွယ်ရာဆံသားအလှလေးကို အံ့မခမ်းပေးစွမ်းတဲ့ပေါင်းဆေးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။(သုံးစွဲနည်း - တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ရေစိုနေသော ဆံသားလေးအနှံ့လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ပေါင်းပေးပါ ၊ ရေနှင့်ဆေးချပါ)
အပြုံးတွေယူ ၊ အပျော်တွေခံစားရင်း ခေါင်းတခါလျှော်ပြီးတိုင်းစိတ်ကြည်နူးဖွယ် ယိမ်းနွဲ့တောက်ပနေသောစွဲမက်ဖွယ်ရာ ဆံသားအလှလေးကို NR Hair Care Special Products (3) မျိုးနှင့်အတူ ပျော်ပျော်ကြီးရယူလိုက်ကြပါစို့
Feel the Nature. NATURE
#NR #Argan #Essential #Haircares #BestHairProducts #Naturegram #0400
ဘာ Skin Care မှ သုံးလို့မရတဲ့ Sensitive Skin ဖြစ်တဲ့သူတွေ ရှိပါသလား မျက်နှာသစ်ဆိုလည်း သုံးလို့မရ ၊ သူများတွေ သုံးနေတဲ့ နို့ရည်ဆိုရင်လည်း အသားအရေမှာ မတည့် ၊ အပြင်သွားလို့ လိမ်းချင်လည်း မိတ်ကပ်ကလိမ်းလို့မရတဲ့ အထူး Sensitive Skin ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နာမည်ကြီး Sensitive Skin ကို ယူပစ်သလို ကုတဲ့ Dr. Bee Skin Care (5) မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော် ။
( 1 ) Dr. Bee Venom Facial Foam – 150 ml - 19,500 Ks ( သုံးစွဲနည်း - နေ့စဉ် မနက် ၊ ည မျက်နှာသစ်ပေးရန် ။ )
(2) Dr. Bee Venom Toner & Emulsion – 150 ml + 150 ml - 24,500 Ks + 24,500 Ks (သုံးစွဲနည်း - မျက်နှာသစ်ပြီးနောက် Cotton Pad လေးဖြင့် Toner လေးကိုသုံးပြီး Emulsion လေးကို မျက်နှာပြင်လေးထဲသို့ ပုတ်လိမ်းပေးရန်။)
(3) Dr. Bee Venom Mist Essence – 50 ml - 16,500 Ks , 100 ml – 27500 Ks (သုံးစွဲနည်း - မျက်နှာပြင်လေးပေါ်ကို နေ့ ရော ၊ ညပါ ဖျန်းပေးနိုင်ပါသည် ။)
(4) Dr. Bee Venom BB Cream – 40 ml - 19,900 Ks (သုံးစွဲနည်း - အထက်ပါ Skincare များသုံးပြီးနောက် မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် Foundation Cream လေးအဖြစ် မျက်နှာပြင်လေးမှာ လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။) အထက်ပါ Sensitive Special Skin Care (5) မျိုး Skin Problem ပြဿနာတွေအားလုံး အဝေးဆုံးပြေး ၊ ချောမွေ့နူးညံ့ ၊ ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို အလှပဆုံး ပိုင်ဆိုင်လိုက်ကြပါစို့ နော် ။
Feel the Nature. NATURE REPUBLIC ------------------------------------
#NatureRepublicMyanmar #DrBeeVenom #SkinCares #Relief #Sensitive #Allergy #Acne #SensitiveSkin #Moist #Soft #Naturegram #0399
NR Cactus 92% Soothing Gel ( Face & Body Lotion 250ml ) 14,500Ks !
Fans ချစ်သူတို့​ရေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အပူရှိန်တိုးတိုးလာတဲ့ နေမင်းကြီးကြောင့် စိတ်ညစ်နေကြပါသလား ?
ယခု NR မှာ နေမင်းကြီးရဲ့အပူရှိန်ကိုလျှော့ပေးပြီး Fans ချစ်သူတို့ရဲ့မျက်​နှာပြင်လေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံး ကို အေးချမ်းစိုပြေနေစေမယ့်​ မိုးနတ်မင်းရဲ့ ကိုယ်ရံတော် တပ်မှုးလေး NR Cactus 92% Soothing Gel ( Face & Body Lotion ) လေး ရောက်ရှိလာပါပြီနော် !
NR Cactus 92% Soothing Gel လေးဟာဆိုရင်တော့ အလွန်လှပပြီး ကမ္ဘာကျော်တဲ့ Korea နိုင်ငံ Jeju ကျွန်း လေးပေါ်မှ အဖိုးတန် Cactus ပင်လေး များရဲ့ အလွန်အေးမြ ကြည်လင် စိုပြေသော Cactus Gel လေးများကို အခြေပြုပြီး အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Cactus ပင်လေးများရဲ့ သူမယှဉ်နိုင်ထူးဆန်းစွမ်းအားက​တော့ အလွန်ပူပြင်း ခြောက်သွေ့နေသော သဲကန္တရကြီးထဲမှာပင် ထာဝစဉ်အေးချမ်း စိုပြေ စွာ ရှင်သန်နေနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအံ့သြစဖွယ် Cactus ပင်လေးများရဲ့ စွမ်းအားများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NR Cactus 92% Soothing Gel လေးဟာ ဆိုရင်တော့ လိမ်းလိုက်ရုံဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး မျက်နှာပြင်လေး နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို အေးမြ ပေါ့ပါး လန်းဆန်း နေစေပြီး နေမင်းကြီးရဲ့အပူဒဏ်မှ အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ နေလောင်နီမြန်းခြင်း မှလည်း အထူးကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အသားအရေလေးပေါ်တွင် နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်၊ သတ္တုဓါတ် နှင့် ဗီတာမင် များစွာကို ကြွယ်ဝစွာဖြည့်ဆည်း ပေးသောကြောင့် အသားအရေလေးကို အေးမြစိုပြေ ၀င်းပနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော် !
ကဲ ချစ်မြတ်နိုးရပါသော Fans ချစ်သူတို့ရေ အခုလို တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့အပူရှိန် တိုးတိုး လာတဲ့ နေမင်းကြီးရဲ့ အပူဒဏ် မှအပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ မိုးနတ်မင်းရဲ့ ကိုယ်​ရံတော် တပ်မှုးလေး ဖြစ်တဲ့ NR Cactus 92% Soothing Gel ( Face & Body Lotion ) လေးရဲ့ အေးမြ လန်းဆန်း တဲ့ အရိပ်လေးမှာ ခိုလှုံကာ ပူအိုက်သော ရာသီ ဥတု ကို ကျော်ဖြတ် လိုက်ကြပါ စို့ !
Feel the Nature. NATURE REPUBLIC ----------------------------------
#NatureRepublicMyanmar #JejuCactus #92SoothingGel #FeelMoist #Soft #Hydration #FaceAndBody #CoolingEffect #MustHaveItem #Naturegram #0398
မျက်နှာပြင်လေး ဖြူဖွေးဝင်းပချင်သူလေး တွေရှိလား ?
မှဲ့ ခြောက် ၊ အမည်းစက် ၊ တင်းတိပ်တွေ အဝေးဆုံးပြေး လူတကာငေးလောက်တဲ့ ဖြူဖွေးဝင်းပ မျက်နှာပြင်လေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင် ဖို့ဆိုတာလူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ထို အိပ်မက်တွေကို အသက်သွင်းဖို့တော့ NR ရဲ့ Whitening Special Products (3) မျိုးပဲ လိုပါတယ်နော်။
( 1 ) Magical Snail Solution Foam Cleanser – 150ml - 26,500 Ks
မှဲ့ခြောက် ၊ တင်းတိပ် ၊ အမည်းစက်တွေ ကင်းစင်ဝေးပြီး မြင်သူတကာလည်ပြန်ငေး လောက်အောင်လှနိုင်လွန်းမယ့် ကြွေရုပ် ကလေးအသွင် ဖြူဖွေးကြည်လင် ၊ ၀င်းပ စိုပြေချောမွတ်တဲ့ အသားအရေလေးအတွက် မျက်နှာသစ်ကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ ကတော့ NR ရဲ့ “ကြွေရုပ်ကလေးလို ၀င်းပမယ့်သူ” လို့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ Magical Snail Solution Foam Cleanser က ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ France နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တန်ဖိုးကြီး ခရုကောင်လေးများရဲ့အပျစ်အချွဲလေး များနှင့် Germany နိုင်ငံမှ သဘာဝ ပန်းဖြူလေး (၇) မျိုး ပါဝင်လို့ ဖြူစင် ၀င်းပခြင်းအတွက် အထူးကို သူမယှဉ်နိုင် အစွမ်းထက်တဲ့ Facial Foam လေးပဲဖြစ် ပါတယ်။
(2) Multi Perfection 10 in 1 Day Cream – 105ml - 37,900 Ks
မှဲ့ ခြောက် ၊ အမည်းစက် ၊ တင်းတိပ်တွေ ပျောက်ကင်းပြီး မျက်နှာပြင်လေးကိုဖြူဖွေး ၀င်းပစေရုံတင်သာမကပုံပြင်ဆန်လော​က်​အောင်​ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှတရားပေါင်းစုံကို တစ်မျိုးတည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်မည့် Super Product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Italy နိုင်ငံမှရှားပါးအဖိုးတန် Miracle Orange Water နှင့် France နိုင်ငံမှကမ္ဘာ့ အဖြူစင်ဆုံး UNESCO အသိအမှတ်ပြု France Celtic Water တို့ ဖြင့်အထူး ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ် ထားသောကြောင့် အသားအရေလေးကို အလုံးစုံ ဖြူဖွေးကြည်လင် ၊ ညီညာချောမွတ် စိုပြေ၀င်းပလာအောင် တစ်မျိုးထဲနဲ့အလှ တရား (၁၀) မျိုးကို အမှန်တကယ်ကို ပေးစွမ်း ပေးနိုင်တဲ့ မရှိမဖြစ်လိုတရ 10 in 1 Cream လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
(3) The First Whitening Sleeping Mask Cream – 90ml – 23,500 Ks
ငယ်စဉ်တုန်းက အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်လေးတွေနားထောင်ပြီး တိုင်း ဂန္တ၀င်တွင်ရွှေမင်းသမီးလေးလို ၊ တော်ဝင်မင်းသား လေးလို ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့အလှတရားတွေနဲ့နိုးထလာမယ် လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ။ ဒါတွေဟာအခုတော့ တကယ်ဖြစ်လာစေဖို့ အိပ်စက်စဉ်မှာ ကြယ်တွေငေးပြီး နိုးထချိန်မှာ စနှိုးဝှိုက် မင်းသမီးလေးတောင် J ၀င်ရလောက်အောင် ဖြူဖွေးကြည်လင်ဝင်းပခြင်းများကို အံ့မခမ်း ပေးတဲ့ The First Whitening Sleeping Mask Cream လေးနဲ့ ပေါင်းတင်လိမ်းကာ အိပ်စက်ပေးနိုင်ပါပြီနော်။
#NR #Whitening #Products #SnailSolution #FoamCleanser #MultiPerfection #DayCream #TheFirstWhitening #SleepingMask #0397
Vitamin B5 Skin Care Series လေး ကတော့ အသားအရေ အထူး Sensitive Skin ဖြစ်ပြီးအသားအရေ မညီညာခြင်း ၊ Allergy ဖြစ်ကာ နီမြန်းခြင်း ၊ တော်ရုံ Skin Care များ အသုံးပြုလို့မရခြင်းအစရှိသော Skin Problems များကို ဖြေရှင်းပေးပြီး အသားအရေလေးကို ပြန်လည်ညီညာစိုပြေ စေသော Skin Care Series လေးဖြစ်ပါ တယ်
#NatureRepublicMyanmar #VitaminB5 #SkinCares #SensitiveSkin #BlushedSkin #Hypoallergicline #SkinProblem #Gentle #Moistful #Everyday #Naturegram #0396
အမြဲတမ်းလန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ Style လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ ရွှန်းစိုတောက်ပ နေတဲ့ သဘာဝအရောင်လေးများကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Nature Republic ရဲ့ Pure Shine Lipstick လေးတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် နှုတ်ခမ်း လှလှလေးကိုဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့ !!!
#NatureRepublic #PureShine #Lipsticks #Natural #Color #Gentle_Lips #Sharper #LongLasting #Tighter #Naturegram #0395
အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်စွမ်း တစ်နေ့တာလုံးလန်းဆန်းနေစေ မယ့် Nature Republic Bulgarian Rose Body Wash & Body Lotion လေးတွေရဲ့ အစွမ်းသတ္တိလေး တွေကတော့ အသားအရေကို ကျန်းမာစေပြီး အရေးအကြောင်း များကိုလည်းကာကွယ်ပေးမယ့်အပြင် တစ်နေ့ တာလုံးပင်ပန်းနွမ်းခဲ့သမျှလေးတွေကိုလည်း ပြန်လည်လန်းဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
#NatureRepublic #FreshHerb #Bodylotion #Bodywash #Longlasting #FullOfFragrance #Softness #Freshness #HaveGoodTime #0394
ချစ်ခြင်းဖွဲ့သီ ဖေဖော်ဝါရီ NR Sweet Heart Gold Promotion ပွဲတော်ကြီး လာပါပြီ !!!!! ချစ်ရနံ့တွေ ထုံလွှမ်းနေသော ဖေဖော်ဝါရီရဲ့ အချစ်စာမျက်နှာအဖွင့်မှာ လှပခြင်း ၊ ကြည်နူးခြင်း ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း တွေနဲ့အတူ ရင်ခုန်သံတစ်စုံကို Tempo မြှင့်ဖို့ NR Sweet Heart Gold Promotion ပွဲတော်ကြီးကို ရွှေရောင်အခွင့်အရေးများစွာဖြင့်စတင် ကျင်းပပေးလိုက်ပါပြီနော် !!! Nature Republic Official Showroom များနှင့် Official Online Delivery (09-421149884, 09-797800008, 09-797600006) တွင် FEBRUARY လ တစ်လလုံး (Feb 1, 2018 to Feb 28, 2018 ) Nature Republic မည်သည့် Products ကိုမဆို ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖိုး ၀ယ်ယူအားပေး ရုံဖြင့် Sweet Heart Gold Promotion ကြီးရဲ့ ရင်ခုန်စဖွယ် လက်ဆောင်များစွာကို အောက်ပါအတိုင်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေ မှာဖြစ်ပါတယ်!
(1 ) ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို ဖန်ဆင်းပေးမယ် ပပ၀တီမင်းသမီးလေးလို ခုနစ်ဆောင် တိုက်နန်း မီးမထွန်းဘဲ လင်းတဲ့ ၀င်းမွတ်စိုပြေ တဲ့ အသားအရေအလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် NR ရဲ့ နာမည်ကြီး မျက်နှာသစ်လေး ဖြစ်သော Pearl De Caviar Gold Facial Foam ( Full Size ) ဗူးကြီး တစ်ဗူးကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(2 ) Argan Shampoo ရဲ့ ချစ်သက်သေ ဆံနွယ်လေးတွေ လင်းလက်စေ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံနွယ်လေးများကို စိုပြေလင်းလက် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းမှုများ အစဉ်ပေးစွမ်းမယ့် Korea's No. 1 Argan Shampoo (Travel Size) ကိုပေးအပ်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
(3 ) ချစ်စရာမျက်နှာပြင်ပေါ်က ၀င်းဝါစိုပြေတဲ့ အလှတရားတစ်ခုကို အသက်သွင်းပေးပါရစေ တိုင်းရှစ်ခွင်မှာ ရောင်စဉ်ပြေးတဲ့ ကြွေရုပ်ကလေးလို ဖြူစင်ဝင်းပ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို တစ်ခါပေါင်းတင်ရုံဖြင့် ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် NR ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Magical Snail Mask လေးတစ်ခုကိုလည်းပေးအပ်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
(4 ) ပိုင်ရှင်လေးကို မျှော်နေမယ့် ချစ်စဖွယ် Sweet Heart Teddy Bear လေးတစ်ကောင်
ဒါတင်မက လှပခြင်းတွေ ယူ ၊ ချစ်စရာ Sweet Heart Teddy Bear လေးကိုပိုက်လို့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် အခိုက်အတန့်လေးကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါ
ဒါကြောင့် အခုပဲ NR ရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ NR Sweet Heart Gold Promotion ကြီးရဲ့ လက်ဆောင်များစွာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ရင်း ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခြင်း တွေနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်ကြပါစို့နော် !
#NatureRepublicMyanmar #February #SweetHeartGold #Promotion #BigGiftSet #0393
ပြီးပြည့်စုံတဲ့မျက်နှာပြင်လေးအလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့ အတွက် Nature Republic
ရဲ့ Beauty Tools လေးတွေကလည်း ပါဝင်အားဖြည့်ပေးမှာပါနော်
#Perfect #MakeupLook #NRBeautyTools #Help #Makeup #PrettyFace #Naturegram #0392
သာယာလှပတဲ့နေ့ ရက်လေးတစ်နေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်အခိုက်အတန့် လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ Nature Republic နဲ့ အတူ စတင်လိုက်ပါနော်
#NatureRepublicMyanmar #StartswithNR #TogetherNR #BeautifulDay #Fresh #Happy #Naturegram #0391
ချောမွေ့ဝင်းပနေတဲ့မျက်နှာလေးရဲ့ ပါးပြင်ထက်မှာ ချစ်စဖွယ် NR Blusher လေးကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်ချိုမြိန်ခြင်းအတိနဲ့ လှပနေမှာ အသေအချာပဲနော်
#NatureRepublic #ByflowerBlusher #Sweet #Cute #Pretty #CheekBlusher #Pickoutnow #Naturegram #0390
နဲ့ Ever Ever Fresh နေစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ ….
NR City Care Marine Water Skin Care Series ပဲဖြစ်မှာ အသေအချာ
#CityCare #MarineWater #SkinCares #ClearFace #Moist #Fresh #NatureRepublicMyanmar #Naturegram #0389
အသားအရေလေးကိုတင်းရင်းစိုပြေစေကာအရေး အကြောင်းများကင်းဝေးလို့ ဝင်းမွတ် လှပနေစေဖို့အတွက် Nature Republic Collagen Dream Radiance Tone Up Cream လေးကို အနားမှာအမြဲခေါ်ထား လိုက်ပါနော်
#NR #CollagenDream #Radiance #ToneupCream #Skin #Elasticity #AntiWrinkle #Moist #Soft #UvBlock #PerfectCream #Naturegram #0382
Nature Republic Iceland လေးရဲ့အစွမ်း
#NatureRepublic #Iceland #Skincares #Moist #Fresh #Cool #Antiwrinkle #Elasticity #Everyday #Naturegram #0381
️ ️ ချောမောလှပခြင်းတွေနဲ့ နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုဖို့ NR BIG New Year Promotion ပွဲတော်ကြီး လာပါပြီဗျို့ !!!!!!!! ️ ️
နွေရာသီရဲ့လွမ်းခြင်းတွေ ၊ ️ မိုးရာသီရဲ့ တမ်းတခြင်းတွေ ၊ ဆောင်းရာသီရဲ့ သတိရခြင်း မှတ်တိုင်တွေ ကို ကျော်လွန်ပြီး တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတာ 2018 ဆိုတဲ့ အချိန်အခါ တစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပြီနော် ။ နှစ်သစ်မှ စ စက္ကန့်လေးတွေ က ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆီသို့ ၊ မိနစ်လေးတွေက ကြည်နူးခြင်းဆီသို့ ၊ ချောမောလှပခြင်း တွေက NR Fans ချစ်သူလေးတို့ ဆီသို့ ရည်ရွယ်ရင်း NR BIG New Year Promotion ပွဲတော်ကြီးကို ယခုစတင် ကျင်းပလိုက်ပါပြီနော် !!!!! ️ ️ Nature Republic Official Show Room များနှင့် Official Online Delivery (09-421149884, 09-797800008, 09-797600006) တွင် JANUARY လ တစ်လလုံး (Jan 1, 2018 to Jan 31, 2018 ) မည်သည့် Products ကိုမဆို ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖိုး ၀ယ်ယူအားပေးရုံဖြင့် အောက်ပါ စွဲမက်ဖွယ် *BIG New Year* လက်ဆောင် ထုပ်ကြီးကို *New Year Special* မေတ္တာ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါ တယ်နော် !!!!!
နှစ်သစ်မှ စ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး လှပခြင်းအတွက် လိုရာသုံးနိုင်တဲ့ NR Fans ချစ်သူတိုင်းရဲ့ အသည်းကျော် ကမ္ဘာ့ No.1 ရှစ်မျိုးသုံး Aloe Vera 92 % Soothing Gel 300 ml ဗူးကြီးတစ်ဗူး !
New Year မှ စ နုပျိုမှုတွေ အပိုင်စားပေးပြီး တင်းရင်းစိုပြေချောမွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်လေးပေါ်က အလှကိုဖန်ဆင်း ပေးနိုင်သော ကမ္ဘာကျော် ကိုရီးယား အနုပညာရှင်တွေရဲ့ လက်စွဲ Ginseng Royal Silk Gold Facial Foam and Watery Cream ( Travel Size ) !
နှစ်သစ်မှ စ ချစ်စဖွယ် ပါးပြင်လေးကို အေးမြစိုပြေ လန်းဆန်းခြင်း တွေ မခွဲတမ်းပေးမယ့် Real Squeeze Aloe Vera Toner and Emulsion ( Travel Size ) !
လာခြင်းကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်မှာ အဟောင်းအနွမ်းတွေဆေးကြောလို့ နူညံ့တဲ့ ဆံကေသာ အလှကို ရှင်းသန့်တောက်ပ သွားစေမယ့် Korea’s No. 1 Argan Shampoo ( Travel Size )! တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်ကြီးကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်!
ဒါကြောင့် 2018 ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှ စပြီး စိတ်သစ် လူသစ် အနှိုင်းမဲ့ လှပပျော်ရွှင်ခြင်း အသစ်တွေနဲ့ ကြည်နူးစွာဖြင့် နေ့တိုင်း ရက်တိုင်းမှာ မျက်နှာပြင်လေးကို ချောမော လှပခြင်းတွေနဲ့ အဆုံးမဲ့ အလှဆင်နိုင်ဖို့ NR BIG New Year Promotion ပွဲတော်ကြီး ဆီသို့ အရောက်လှမ်းလာခဲ့လိုက်ပါ စို့နော် !!!!! ️ ️
#NatureRepublicMyanmar #January #BigNewYear #Promotion #NewYearSpecial #BigGiftSet #0380
ဆောင်းရာသီရဲ့​လေပြေညင်းလေးတွေကြား မှာ UV Rays တွေကို အပြည့်အ၀ကာကွယ် ပေးမယ့် Provence Calendula Ice Puff Sun လေးနဲ့ အတူ လွတ်လပ်စွာ ခြေဆန့်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် အခိုက်အတန့်လေး ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါ
#NatureRepublic #UVraysBlocker #Sunscreen #ProvenceCalendula #IcePuffSun #Suncare #0379
၀က်ခြံအမာရွတ်တွေ ၊ ချိုင့်ခွက်တွေ ၊ အသားအရေ မညီညာတာတွေကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ဖြစ်နေရတယ် ဆိုရင်တော့ fans ချစ်သူတို့ ရဲ့ချစ်စဖွယ် မျက်နှာတော် ​လေးတွေ ညှိုးနွမ်းမနေပါနဲ့တော့နော်။ NR ရဲ့Acne Scars Special Skin Care (3) မျိုးနဲ့ အခုပဲ ကြည်လင် ၀င်းပ ညီညာစိုပြေ ချောမွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပါတော့မယ်
( 1 ) Super Aqua Max Soft Peeling Gel – 150ml - 17,500 Ks
(သုံးစွဲနည်း - တစ်ပတ် ၃ ကြိမ် ရှင်းသန့် ခြောက်သွေ့ သောမျက်နှာပြင်လေးပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပါ ၊ ဆဲလ်သေလေးတွေ အလိပ်လိုက် ထွက်လာတဲ့အထိ ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ ၊ ရေနှင့် သစ်ချလိုက်ပါ ၊ မျက်နှာပြင်လေးကို ချက်ချင်းလက်ငင်း သူမယှဉ်နိုင် ရှင်းသန့် ကြည်လင် နူးညံ့ဖြူဖွေးဝင်းပ သွားစေမှာ အသေချာပဲဖြစ်ပါတယ်)
(2) Fresh Green Tea Facial Foam - 150ml - 15,500 Ks
(သုံးစွဲနည်း - နေ့စဉ် မနက် ၊ ည မျက်နှာသစ်ပေးရန်)
(3) Shea Butter Steam Cream – 100ml - 29,900 Ks
(သုံးစွဲနည်း - နေ့စဉ် နေ့ ၊ ည မျက်နှာပြင်လေးမှာ လိမ်းပေးရန်) နတ်သမီးလေးတစ်ပါးအသွင် ပြစ်မျိုးမှဲ့ မထင် ကြည်လင်စိုပြေ၀င်းမွတ်သော မျက်နှာပြင် လေးဖြင့် နေ့ရက်တိုင်းကို သာယာပျော်ရွှင် စွာ ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ NR ရဲ့အထက်ပါ Acne Scars Special Skin Care (3) မျိုးကို အထူး လမ်းညွှန်ရွေးချယ် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
#NR #Acne_Scars #Healing_Scars #Products #Moist #Soft #Fresh #FacialFoam #Peeling_Gel #Cream #DailyUse #Naturegram #0378
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို အလှပျက်စေတဲ့ Skin Problems တွေထဲမှာ ဆားဝက်ခြံလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွယ်လေးပါ NR ရဲ့Blackhead Special Product (3) မျိုးနဲ့အတူ ဆားဝက်ခြံတွေ အရှင်းပျောက်ပြီး လှပခြင်းတွေနဲ့လိုရာခရီး ကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါပြီနော် ️
(1 ) Super Aqua Max Soft Peeling Gel – 150ml - 17,500 Ks
ကိုယ့်ရဲ့ ဖုံးကွယ်နေတဲ့ အလှတရား အားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့သူက ထိပ်တန်းပါပဲ ။ ချစ်စရာမျက်နှာပြင်လေးကို ဖွက်ထားတဲ့ ဆားဝက်ခြံများကို အဓိက ဖြစ်စေသော ဆဲလ်သေများ ၊ ပြင်ပမှလာတဲ့ အညစ်အကြေးများ ၊ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းပြီး ကန့်လန်ကာနောက်က ပကတိ ဖြူစင်ချောမွတ်တဲ့ မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ အလှတရားကို NR Super Aqua Max Soft Peeling Gel ဆိုတဲ့ ကြိုးဆွဲကိုကိုလေးက ဖော်ထုတ်ပေးပါမယ်နော်။
(2 ) Blackhead Clear Nose Pack – 1pc - 1,000 Ks
ဆားဝက်ခြံကို မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အများဆုံး ဖြစ်နေစေသော နှာခေါင်းလေးတစ်ဝိုက် အတွက် အထူးသီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသော Blackhead Clear Pack လေးကတော့ သုံးရတာ အရမ်းလွယ်ကူပြီး ဆားဝက်ခြံ တွေကို အမြစ်ပါမကျန်အံ့မခမ်းဖယ်ရှား ပေးမယ့် အစွမ်းထက်သူရဲကောင်းလေးပေါ့ ။
(3 ) Hawaiian Fresh Clear Serum - 54ml - 26,500 Ks
ဆားဝက်ခြံတွေ အမြစ်ကပါသွားပြီးနောက် ကျန်ခဲ့တဲ့ ချွေးပေါက်ကျယ်လေးတွေကို ရှာလို့ တောင်မတွေ့နိုင်အောင်သန့်ရှင်း သိသာစွာပြန်လည်ကျင်းလာစေဖို့ အပြည့်အ၀ကို တာဝန်ယူပေးမယ့် သူကတော့ ရှားလော့ဟုမ်းတောင် ရှာဖွေမတွေ့မယ့် မျက်နှာပြင်ပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်လို့ အထူး နာမည်ကြီးတဲ့ Hawaiian Fresh Clear Serum လေးဘဲဖြစ်ပါတယ် ။ အလွန်လှပတဲ့ U.S.A Hawaii Island မှ ကမ္ဘာကျော် တန်ဖိုးကြီး U.S.A Hawaiian Pure Clay Water နှင့် Hawaiian Deep Sea Water လေးကို အခြေခံပြီး ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ကြောင့်ချွေးပေါက်လေးတွေကိုပျောက်​ကင်း​စေရုံသာမကအဆီပြန်ခြင်းကိုပါတစ်နေ့တာ လုံး ထိန်းချုပ်ပေးကာအသားအရေလေးကို ကြည်လင်ဖြူစင် ညီညာချောမွတ်ဝင်းပ​စေ မယ့်အစွမ်းထက်မှော်ဆရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယခုမှစပြီး ဆားဝက်ခြံတွေနဲ့ မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ အလှတရားကို ဖုံးကွယ်မခံပါနဲ့တော့နော်။ NR ရဲ့ အထက်ပါ Blackhead Special Skin Care (3) မျိုးကိုသာ လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲလိုက်ပါ လူတကာငေးတဲ့ မျက်နှာပြင်လေးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
#NR #Blackhead_Solutions #Products #PeelingGel #Serum #NosePatch #Oil_Control #Blackhead_Clear #Moist #Soft #0377